यही आवाजमा स्थापित हुनुछ : यावेश थापा- फिचर - कान्तिपुर समाचार
यही आवाजमा स्थापित हुनुछ : यावेश थापा
'लाखौं हजारौं' बोलको गीत रूचाइएपछि नै हो यावेशको चर्चा चुलिएको । 'मायालु' बोलको गीतले त उनलाई गायन क्षेत्रमा नयाँ पहिचान दिएको छ । 'ए मुटु' उनको पछिल्लो गीत हो ।
''लाखौं हजारौं' मेरो पहिलो कदम हो'
कार्तिक १८, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — साथीहरुसँग चिया पिउँदै थिए यावेश । छेउमा थियो, चिया पिउँदै गरेको एक समूह । समूहको बीचमा एउटा स्पीकर । जसै यावेशले चिया सुरुप्प पिए स्पीकरमा बज्यो,'लाखौं हजारौंमध्ये तिम्रो मुस्कानले किन हो मलाई पागल बनाउँछ, लाखौं प्रयास गर्दा पनि किन मलाई तिम्रै यादले सताउँछ' ।
यावेशको ध्यान स्पीकर छेउको समूहमा पुग्यो । सबै गीतमा मन्त्रमुग्ध थिए । आफ्नो गीत ५/६ पटक त्यहाँ बजेको सुन्दा यावेशको मन ढक्क फुल्यो । छेउमा भएका साथीहरुले यावेशको नाम लिएर ठूल्ठूलो आवाजमा जिस्काउन थाले । तर, गीत सुन्दै गरेको समूहको ध्यान त्यता तानिएन । उनीहरु गीत सुन्नमै मस्त देखिन्थे ।
गत पुसतिरको कुरा हो यो । कोटेश्वरको एउटा क्याफेमा एकजना व्यक्तिले गीटारमा यही गीत बजाउँदै गरेको देखेपछि यावेशलाई लाग्यो,'गीत त ‍चलेछ' । 'लाखौं हजारौं' बोलको गीत युवा दर्शकमा चलेपछि नै हो यावेश थापाको चर्चा चुलिएको । 'मायालु' बोलको गीतले त उनलाई गायन क्षेत्रमा नयाँ पहिचान दिएको छ । 'ए मुटु' उनको पछिल्लो गीत हो । उनलाई आफूले लेखेको र गाएको गीतमध्ये सबैभन्दा धेरै मनपर्ने 'ए मुटु' र 'झरी' हो ।
सार्वजनिक गरेको एक महिनामै १० लाख भ्यूज प्राप्त गर्यो 'ए मुटु'ले । 'मैले अपेक्षा नै गरेको थिइनँ । एक महिनामै मिलियन भ्यूज पुग्दा खुसी छु । राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ । गीत लेखेको एक वर्ष भइसकेको थियो । भिडियो बनाउने सोचेको थिएँ, तर लकडाउनले सम्भव भएन,' उनले सुनाए ।
सानैदेखि गीत लेखनमा रुचि
सानैदेखि गीत लेख्थे यावेश । शंखमूलको इनोभेटिभ इंग्लिस स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा उनले गीत लेख्न सुरु गरे । खासमा उनी इसाई हुन् । सानैदेखि चर्चमा गीत गाएको अनि वाद्यवादन बजाएको देख्थे । उनलाई पनि रहर लाग्थ्यो गाउन, बजाउन । बिस्तारै चर्चका दाइदिदीबाट संगीत सिक्न थाले । चर्चमै बजाउन पनि थाले । त्यसपछि त झनै उनलाई संगीतमै झुकाव बढ्न थाल्यो ।
कभर गीत गाउने प्रयास गर्थे । तर आफ्नो आवाज चित्त बुझ्थेन । गीत लेख्न कहिल्यै छोडेनन् । बिस्तारै उनको लेखनमा निखार आउन थाल्यो । कक्षा ७ मा लेखेका एउटा गीत रेकर्ड गर्ने योजना छ यावेशको । 'सानैबाट संगीतमा लाग्ने मन थियो । उचित समयको पर्खाइमा थिएँ । संगीतलाई रहरको हिसाबले गर्दै गएँ,' उनी सुनाउँछन् ।
अन्तर्मुखी स्वाभावका यावेश एक्लै हुँदा मात्र संगीत गर्थे । 'म सानैदेखि कसैले मलाई नचिनोस् भन्ने सोच्थें । धेरैलाई थाहै थिएन म संगीत गर्छु भन्ने । साथी पनि कम थिए । जति थिए उनीहरुले मेरो गायनको तारिफ गर्थे,' उनले विद्यालयका दिन सम्झे,'मलाई त्यो बेला संगीत गर्न सक्दिनँ होलाजस्तै लाग्थ्यो ।'
कक्षामा ९ मा हुँदा विद्यालयभित्र गायन प्रतियोगितामा भएको थियो । त्यसमा यावेश ७ औं स्थानसम्म पुगे । त्यसपछि उनलाई संगीतमा केही गर्न सक्छु कि भन्ने लागेको थियो । कक्षा १० मा हुँदा त गीत निकाल्न निकै हौसिएका थिए । एसएलसी सकिनासाथ 'प्रयास' बोलको गीत रेकर्ड पनि गराए । साथी प्रतिक शाक्यसँग मिलेर रेकर्ड गरेको गीतबाट सोचेजस्तो केही भएन । 'त्यो बेला इनलाइन क्रियसन रेकर्ड पिकअपमा थियो । हामीले त्यहीँबाट पहिलो रेकर्डिङ गर्ने सोच्यौं । 'प्रयास' सन् २०१७ मा सार्वजनिक गर्यौंा । गीतबाट सोचेजस्तो प्रतिक्रिया भने आएन,'उनी सुनाउँछन्,'त्यतिखेर संगीतमा केही होला कि भनेर सोचेको थिएँ । तर केही भएन ।'
'प्रयास'ले एक हजार भ्युज पाउँदा उनी निकै उत्साहित भएका थिए । भ्युजको स्क्रिनसट लिएर फेसबुकमा पोस्ट गरेको दिन अझै सम्झन्छन् यावेश । पहिलो गीतपछि उनलाई संगीतमा अभ्यास नपुगेको जस्तो लाग्यो । उनले आफूलाई सुधार्दै लगे । आफूले लेखेको गीत गाउँदै फेसबुकमा सेयर गर्न थाले । लिभरपुल कलेजमा ११ कक्षामा पढ्दै गर्दा फेसबुकमा गीतहरु राख्न थाले । फेसबुकमा राखेको गीत अर्कै व्यक्तिले युट्युबमा राख्न थालेको एकदिन साथीमार्फत् उनले चाल पाए । त्यसपछि साथीहरुको सल्लाहअनुसार उनले युट्युब खोले । 'त्यो व्यक्तिले राखेको युट्युबमा मेरो गीत ५/६ हजार भ्युज गएको हुन्थ्यो । त्यहीबेलादेखि मैले युट्युबमा गीत राख्न थालें,' उनले भने ।
आफ्नो कोठाभित्रै रेकर्ड गरेका गीत युट्युबमा राख्थे । गीत लेख्न असाध्यै मन पराउँथे उनी । गीतको भ्युजले खासै अर्थ राख्थेन । आफ्नो सन्तुष्टिका लागि युट्युबमा गीत राखेको उनी बताउँछन् ।
कक्षा १२ को अन्तिमतिर साथीहरुसँग मिलेर 'मनसुन' नामको ब्यान्ड पनि खोले । 'ब्यान्डमा मसँगै साथीहरु ओएसिस थापा, अम्सु कार्की, रोजन बस्नेत, साहिल श्रेष्ठ, श्रीजन महर्जन, सपना महतरा थियौं । यत्तिकै रमाइलोको लागि ब्यान्ड खोलेका थियौं । मेनस्ट्रिममा आएर धमाका गर्ने केही सोचेका थिएनौं । हामीलाई सँगै बजाउन रमाइलो लाग्थ्यो,' उनले सुनाए ।
ब्यान्डले कलेजका कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुति दिने गर्थ्यो । ब्यान्डमा आबद्ध हुँदा पनि यावेशलाई सोलो करियर सुरु गर्ने मन थियो । तर ब्यान्डका अन्य साथीले 'के भन्लान्' भनेर सोलो करियर अगाडि बढाउन सकिरहेका थिएनन् । तर स्नातक पढ्न थालेपछि ब्यान्ड सदस्यहरु आ-आफ्नै क्षेत्रमा व्यस्त भए । सबै साथीहरुले ब्यान्ड बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि भने उनले आफ्नो सोलो करियर थाले ।
कान्तिपुर सिटी कलेजमा बिसिए(ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन)को प्रथम वर्षमा पढ्दै गर्दा उनले 'लाखौं हजारौं' बोलको गीत सार्वजनिक गरेका हुन् । 'क्लासएक्स प्रिजेन्टेसन'सँग मिलेर गत जनवरीमा यो गीत निकालेका हुन् । 'मसँग गीत हुन्थ्यो । म गर्न सक्छु भन्ने पनि थियो । तर कसरी गर्ने केही थाहा थिएन,' उनले भने, 'भेक दाइ(वाइवा)ले मलाई उत्साह दिइरहनु हुन्थ्यो । एकदिन उहाँले क्लासएक्सबाट मिलेर गीत गर्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसपछि लाखौं हजारौं गर्यौं ।'
गीतलाई १०/२० हजारले युट्युबमा हेर्लान् भन्ने सोचेका थिए यावेशले । गीतबाट खासै अपेक्षा गरेका थिएनन् । अपेक्षा पूरा नहुँदा चित्त दुख्छ भन्ने उनलाई पहिला सार्वजनिक भएका गीतहरुबाट अनुभव भइसकेको थियो । अपलोड भएको केही दिन कछुवा गतिमा गीतको भ्युज बढ्यो । त्यसपछि बिस्तारै ५० हुँदै एक लाख भ्युज प्राप्त भयो । एक लाख भ्युज पाउँदा ब्यान्डका साथीहरुसँग यावेशले 'बारबिक्यु पार्टी' गरे ।
अचानक गीत जताततै बज्न सुरु भयो । 'बिस्तारै गइरहेको थियो भिडियो । मलाई त्यति चासो पनि थिएन । तर पछि खोइ कसरी केही दिनपछि जताततै यो गीत बजेको सुनें । मैले पछ्याउँदै आएको सेलिब्रिटी, गायक, संगीतकारले मन पराइदिनु भयो,'उनी गीत चर्चामा आउँदाका दिन सम्झे,'एकदिन माल्भिका सुब्बाले फेसबुकमा मेरो गीत सेयर गर्नुभयो । कस्तो राम्रो गीत भनेर म्यासेज गर्नुभयो । अपेक्षा नगरेको गीत थियो । एकैताल चर्चामा आउँदा निकै खुसी छु । गर्विलो पनि अनुभव हुन्छ, मेरो पहिलो कदम हो 'लाखौं हजारौं'।'
यो गीत उनले कल्पना गरेर लेखेका हुन् । गीत लेख्न बस्दा सुरुमा शीर्षक/विषय सोच्छन् उनी । त्यही विषयमाथि रहेर गीत लेख्न ध्यान केन्द्रित गर्छन् । उनी गीतको शब्द सँगसँगै संगीत भर्दै लान्छन् । उनलाई गीत लेख्न समय लाग्दैन । कल्पना गरेर गीत लेखिरहेका हुन्छन् । 'जबरजस्ती लेख्न बसें भने राम्रो गीत लेखिँदैन जस्तो लाग्छ । तर मलाई लेख्ने मन भएपछि दिमाग, हातले काम गर्न थाल्छ,' उनले भने ।
'लाखौं हजारौं' आधा घण्टामै तयार भएको गीत हो । कक्षा १२ पढ्दै गर्दा उनले यो गीत लेखेका थिए । आफ्नो कोठाभित्रै गाएर युट्युबमा पनि राखेका थिए । खासै नोटिसमा परेन । तर क्लासएक्सबाट आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक भएपछि गीतले चौतर्फी चर्चा कमायो ।
टेलिभिजनमा पनि गीत बज्न थालेपछि परिवार आफ्नो संगीत करियरतर्फ सकारात्मक भएको यावेश सुनाउँछन् । यसअघि उनलाई परिवार संगीत करियरलाई लिएर सकारात्मक नभएकोझैं लाग्थ्यो । 'नेपालजस्तो ठाउँमा संगीतमै भविष्य खोज्छु भन्न गाह्रो छ । मेरो परिवारले संगीत नगर भन्नु हुन्थेन । तर उहाँको एक्सनबाट मलाई थाहा हुन्थ्यो । तर अहिले संगीतमा मेरो विकास देख्नु भएको छ,' उनले भने।
उनका बुबा एक कम्पनीका म्यानेजर, आमा गृहणी । उनकी एक बहिनी छिन् । अहिले परिवारको साथ पाएर खुसी छन् यावेश ।
'लाखौं हजारौं' बोलको गीत ८४ लाखभन्दा बढी पटक युट्युबमा हेरिएको छ । गीतलाई लाखौंले मनपराइदिएपछि उनी 'नर्भस' भएका थिए । '८ मिलियन भ्युज पुग्दा गीतको उचाई माथि उक्लियो । यो उचाईलाई अर्को गीतले भेट्ला/नभेट्ला भन्ने डर पनि लाग्यो,' आफ्नो अनुभव सुनाए ।
तर,'मायालु'ले त्यो डर पनि कम गरिदियो । गीतलाई ९० लाख बढीले हेरिसकेका छन् । उक्त गीत भेक र उनले मिलेर लेखेका हुन् । यो पहिलो लकडाउनमा रेकर्ड गरिएको गीत हो । मलेसियामा हुँदा भेकले गीतका केही शब्दहरु लेखेर यावेशलाई पठाएका थिए । एकदम मन परेको थियो यावेशलाई गीत । पछि भेक नेपाल फर्किएपछि दुवैले मिलेर गीत लेखे । अनि गीत रेकर्ड गरे । 'लकडाउन कडा थियो । त्यतिखेर स्टूडियोमा एकजना मात्र हुन्थ्यौं । म गएर आफ्नो भाग रेकर्ड गरेर घर फर्कन्थें । अर्को पटक भेक दाइ गएर रेकर्ड गर्नुहुन्थ्यो । सँगै रेकर्ड गर्न पाएनौं,' गीत रेकर्ड गर्दाको समय सम्झे ।
लकडाउनमा भिडियो बनाउन सम्भव थिएन । त्यसैले अमेरिकामा भएको 'एएक्ससी भ्लग्स' भन्ने टिमलाई भिडियो बनाउने अवसर दिए । भिडियो तयार भएपछि लकडाउनबीच नै गीत सार्वजनिक गरे । गीतलाई अत्याधिक दर्शकले रुचाइदिए । 'यो गीतबाट पनि धेरै अपेक्षा गरेकै थिइनँ । तर मायालु त ओभरै चल्यो,' दंग पर्दै सुनाए,'खुसी छु । एकदम सामान्य तरिकाले लेखेको गीत थियो । म त सन्तुष्टि छु । मायालुचाहिँ सबै दर्शकले सुन्ने गीत हो नि । धेरैले जनाले मन पारइदिनु भयो ।'
१८ वर्षीय यावेशलाई युवा दर्शकले प्रेरणाको स्रोत मान्छन् । 'तपाईंलाई देखेर गीत गाउन थालेको' भन्नेहरु देखेर उनलाई खुसी लाग्छ । भन्छन्, 'अब मलाई कसैको लागि रोल मोडल भएर राम्रो संगीत ल्याउनुपर्छ भन्ने चुनौती थपिएको छ । अझै संगीतमा 'एक्सपेरिमेन्ट' गर्ने मन छ । अहिलेको मेरो उदेश्य पनि यही हो ।'
यावेश आफ्ना गीतको भिडियोमा देखिरहेका हुँदैनन् । भिडियोमा देखिन मनपराउँदैनन् उनी । 'मान्छेले मेरो अनुहारभन्दा पनि मेरो संगीत हेरेर मलाई जज गरून् भन्ने लाग्छ,' उनले भने,'मलाई त सबैभन्दा रमाइलो नै दर्शकको अगाडि स्टेजमा प्रस्तुति दिन मनपर्छ । जहाँ गीटार होस्, मानिसहरु होऊन् । मेरो आवाज त्यति राम्रो पनि छैन । म सामान्य गाउँछु मलाई थाहा छ । दामी आवाज नभए पनि यही आवाजले आफूलाई स्थापित गरेर देखाउनु छ ।'
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ १५:३९
एकता कायम राख्‍ने अभियान ब्युताउँदै नेकपाका सांसद, संयोजक भन्छन्- विभाजन खोज्‍नेलाई कार्यकर्ताले मिल्काउनेछन्
पहिले पनि पार्टी फुटको पक्षमा जानेहरूलाई समर्थन गर्दैनौं भनेका थियौं, अहिले पार्टी विधि, विधान, निर्णय नमान्ने नेता पार्टी फुटको पक्षमा हुने भएकाले त्यस्तालाई समर्थन गर्दैनौं : सांसद राई
कार्तिक १८, २०७७ जयसिंह महरा
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद फेरि चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अहिलेको अवस्थामा दुवै जना मिलेर अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले अलग-अलग पार्टी बनाएर जाने विकल्पबारे सोच्न भनेका छन् ।
मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी र त्यसबाट सिर्जित गरिबी, बेरोजगारी, अनियमितताको दलदलमा फसेको बेला झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेको पार्टीमा विभाजनको स्थिति उत्पन्न भएको हो । यसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो व्यक्त भइरहेको छ । नेकपा र सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
नेकपाभित्र विभाजनका लागि तयार रहन अध्यक्षको तहमै विवाद उठेपछि सोहीअनुसार विभिन्न तयारी भइरहेका जानकारी सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नयाँ पार्टी गठनको तयारी गरेको र त्यसको संरचनासमेत तय भइरहेको कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको भनाइ छ । अर्कोतिर ओली पक्षले दाहाल-नेपाल पक्षले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको तयारी भइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आफूविरुद्धका दाबीलाई खारेज पनि गरिरहेका छन् ।
पार्टीभित्रको विवाद चरमोत्कर्ष भएको बेला नेकपाका सांसदहरू भने पार्टी फुटको पक्षमा नलाग्ने भनेर अभियान सञ्चालन गर्दैछन् । स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी विभाजन हुने अवस्था आएपछि नेकपा सांसदहरूले साउन २५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी विभाजनको पक्षमा आफूहरू नलाग्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । एकताका लागि दबाब अभियानमा त्यतिबेला ६१ सांसदहरूले आफूहरू कुनै पनि पक्षमा नलाग्ने भनेर हस्ताक्षर सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले सोही समूह सक्रिय हुन लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिका सभापतिसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा सांसदहरू एकताको अभियानलाई फेरि सक्रिय पार्न लागेका हुन् ।
पार्टी विभाजनको एजेन्डा पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमा नपुग्दै पनि एकता गम्भीर मोडमा पुगेको शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट थाह हुन आएकाले आफूहरू पुनः एकताका लागि सक्रिय हुन लागेको दाहालले बताए ।
पार्टीमा जे नहुनुपर्ने हो त्यही कुरा भइरहेको भन्दै दाहालले त्यसको जिम्मेवार शीर्ष नेतृत्व रहेको बताए । उनले बारम्बार विवाद दोहोरिँदा जनता र कार्यकर्तामा पार्टीप्रति निराशा पैदा भएको बताए । शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी बढी भएकाले पनि यो अवस्था आएको र त्यसको निराकरण पार्टीको विधिबाट हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ । 'पार्टीमा जे नहुनुपर्ने हो त्यही भइरहेको छ र यसको जिम्मेवार शीर्ष नेतृत्व नै हो । उहाँहरूले जिम्मेवारीको भारी बोक्न सक्नुभएन कि भन्ने सर्वत्र अनुभव हुन थालेको छ । भारी बोक्न सक्नुहुन्न भने जिम्मेवारीबाट बिदा भएर अवकाशको जीवन बिताए राम्रो हुन्छ,' उनले थपे, 'पार्टीको प्रक्रिया र पद्धति सबैले मान्नुपर्छ । नमान्नेहरू महाधिवेशनसम्म गएर त्यहाँबाट बिदा भए हुन्छ । समस्यारहित पार्टी त हुँदैन । तर विभाजनसम्म जाने समस्या भनेको नयाँ हो । त्यो गर्न दिइँदैन ।'
पार्टीमा पछिल्लोपटक देखिएको समस्या समाधानका लागि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच छलफल चलिरहेको अर्का सांसद सुरेशकुमार राईले बताए । उनले भने, 'पहिला पनि पार्टी फुटको पक्षमा जानेहरूलाई समर्थन गर्दैनौं भनेका थियौं, अहिले पनि पार्टी विधि, विधान, निर्णय नमान्ने नेता पार्टी फुटको पक्षमा हो भन्ने र त्यस्तालाई समर्थन नगर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो ।'
अहिले आफूहरूले पार्टी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भनेर दबाब दिने राईले बताए । पार्टी अगाडि बढाउने र महाधिवेशनमा जानेबारे पछिल्लो स्थायी कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नका लागि पनि दबाब दिइने उनको भनाइ थियो ।
अर्का सांसद झपट रावलले पनि पार्टी विवाद फुटको तहसम्म जान लागेकाले सांसदहरूले एकताका लागि दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । दसैं मनाउन सांसदहरू काठमाडौं बाहिर गएका र आउनेक्रम चलिरहेकाले अब भेला भएर थप छलफल गर्ने उनले बताए ।
यसरी दबाब दिनेमा ओली, दाहाल र नेपाल तीनै पक्षका सांसदहरू रहेका छन् । एकताका लागि दबाब दिने समूहको नेतृत्व गरेका सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली निकट हुन् । सांसद राई कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल निकट हुन भने रावल वरिष्ठ नेता नेपाल निकट छन् ।
पार्टी एकताका लागि शीर्ष नेताहरूलाई दबाब दिनका लागि लागेको सांसदहरूको नेतृत्व गरिरहेका कृष्णप्रसाद दाहालसँग नेकपाको वर्तमान विवादबारे गरिएको कुराकानीको अंशः
यसअघि नेकपा विवाद स्थायी कमिटीसम्म पुगेको थियो, यसपटक शीर्ष नेतृत्वमा मात्रै सीमित देखिन्छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले नेतृत्व तहमा मात्रै समस्या देखिएको हो । नेकपा नेताहरूले मात्रै बनेको होइन, तल कार्यकर्ता र मतदाताको जगले बनेको हो । यो पार्टी ठूलै धक्कामा पनि सुरक्षित रहन्छ । त्यसैले ठूला मान्छेलाई के मन लाग्यो त्यसका आधारमा कार्यकर्ताहरू चल्दैनन् । पार्टीको पक्षमा चल्छन् । कसैलाई के सनक चलेको छ त्यसको आधारमा पार्टी चलेको छैन ।
नेकपा सांसदहरूले सरकारले गरेका कामहरूको समर्थन र आलोचना गर्न तथा सुझाव दिनका लागि संसदीय दलको बैठक बस्दैन । संसद अधिवेशन छैन । यस्तो बेलामा पार्टीभित्र विभाजनको रेखा खिचिँदै छ । एकातिर निर्वाचित सांसदले बोल्न पाएका छैनन् अर्कोतिर पार्टीको भविष्य धरापमा छ, यसबारे सांसदहरू कत्तिको चिन्तित हुनुहुन्छ ?
संसदीय समितिहरूको तर्फबाट सरकारलाई सुझाव दिने र आलोचना गर्ने काम गरिरहेका छौं । महामारी र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा सरकारले पनि काम गर्दै नगरेको होइन, गरेको छ ।
सुशासनका विषय भने उठाउनुपर्ने भएको छ । सुशासनको पाटोमा सरकारले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । अर्थतन्त्रको अवस्था ठेगानमा छैन ।
कोरोना महामारीलाई अमेरिकाले त नियन्त्रणमा लिन सकेन हाम्रो क्षमता कम भएको मुलुकमा गाह्रो छ । तर सरकार त्यसो भनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । ठूला राष्ट्रका उदाहरण दिएर हाम्रो सरकार संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । त्यसका लागि कि त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो, हामीले सकेनौं भनेर । नत्र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई सरकारले गराउनुपर्छ । त्यसमा हामी सांसदहरू प्रष्ट छौं र सरकार यसमा प्रष्ट छैन भने प्रष्ट हुनुपर्छ ।
तर, अहिले पार्टीको आन्तरिक किचलोले सबै कुरालाई प्रभावित पार्न थाल्यो । यो किचलोको स्थायी समाधानतर्फ जानुपर्छ । सत्तारुढ दलको यो किचलोले राज्यका कुनै पनि निकायमा प्रभाव नपारोस् । राज्य गतिशील ढंगले चल्नुपर्छ । पार्टी र त्यसभित्रका कचिंगल भने रहिरहन्छन् । यो कचिंगलले जनतालाई असर पर्नेगरी ल्याउन हुन्छ र ! भन्नेप्रति हामी गम्भीर छौं । हेर्दै जाउँ के परिणाम आउँछ । तर, यस्तो तरिकाले धेरै दिन अघि बढ्न सकिँदैन र बढ्न हुँदैन ।
यसको अर्थ आरपार गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
आरपार भन्ने हुँदै हुँदैन । आरपार त नेताहरूले मात्रै भनेका हुन् । कार्यकर्ताले त आरपार गर्न खोज्नेलाई मिल्काउँदै एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ भनिरहेका छन् । आरपार गरौं भन्ने जो नेताहरूको मनमा छ ती नेताहरू मात्रै आरपार भएर बसे हुन्छ । तर, यो आन्दोलन, कार्यकर्ता आर-पार गर्ने मानसिकतामा छैनन् । कार्यकर्ताले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लिएर जान्छ । मन नलाग्नेहरू, सँगै बस्न नसक्नेहरू अर्को पार्टी बनाउन त सक्दैनन्, त्यसो गर्न दिइँदैन पनि, घरमा बस्न भने पाउछन् ।
पार्टी विभाजन हुनुहुन्न भन्ने तपाईहरूको अभियानको औचित्य अहिलेको अवस्थामा सावित होला ?
पार्टीमा समस्या बढ्दै गएपछि हाम्रो अभियानको औचित्य पनि बढ्दै जान्छ । अहिले सुषुप्त भएकाले त्यति बढेको छैन । समस्या बढ्दै गएपछि आकार लिँदै जान्छ । यो अभियानले पार्टीलाई ठीक ठाउँमा लिएर जान्छ । नेताहरूले यो कुरा बुझेका पनि छन् । पार्टीमा समस्या तल होइन माथि हो र माथिका समस्या समाधान भएपछि तल्ला कमिटीमा भएका समस्या पनि समाधान भएर जान्छन् । यो पार्टीलाई अब महाधिवेशनतिर लिएर जानुपर्छ । सरकारको बारेमा पनि महाधिवेशनले छिनोफानो गर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच छुट्टिएर जानेबारे कुरा भए भन्ने सार्वजनिक भइरहेको छ । अहिलेको मुलुकको जुन परिस्थिति छ यस्तो बेला प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलभित्र फुटको तहमा पुग्नेगरी विवाद किन ?
उहाँहरूले हाम्रो कानुन नियम र संवैधानिक व्यवस्था तथ पढ्नुभएको छ होला नि ! उहाँहरूले चाहँदैमा पार्टी फुट्ने र जुट्ने हुन्छ र ? खेल हो र यो ? पार्टी विभाजन सम्भव छ ? हाम्रा कानुनले त्यो दिन्छ ? त्यसैले उहाँहरूले गरेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
कानुनको कुरा गर्नुभयो, यसअघि पनि दल विभाजन गर्ने अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले ल्याउनुभएको होइन र ?
अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सही गर्ने मान्छे (सांसदहरू) पनि चाहिन्छन् होला नि ! पार्टी फुटाउने पक्षमा सही गर्न तयार हुन पनि मान्छे चाहिएलान् नि ! उहाँले गर्ने पनि एउटै सही हो र हामीले गर्ने पनि एउटै सही हो । सामान्तहरूका पालामा जस्तो उनीहरूले सही गर्दा दुई सय हुने र हामीले सही गर्दा एकमात्रै हुने त होइन । त्यसैले उहाँहरूको मनगढन्ते कुराले यो पार्टी फुट्ने र जुट्ने होइन ।
नेकपाका ६१ सांसदले भने- हाम्रो टाउका गनेर पार्टी फुटाउने सपना नपाले हुन्छ
प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७७ १५:३३